भाषण शिष्टाचारको नियम
"सुप्रभात" - हामी काम गर्न आउँदा हामी सामान्यतया सहकर्मीलाई स्वागत गर्दछौं, र यो जान्न बिना हामी संचारमा भाषण शिष्टाचारका नियमहरू पछ्याउँछौं। तिनीहरू धेरै विविध हुन्छन् र, पहिलो नजरमा, उबाऊ र कुराकानीको सामान्य कोर्समा मात्र हस्तक्षेप गर्दछ। तर वास्तवमा, बिना यस्ता प्रतिबन्धहरू, यो कुराकानी प्रत्येक प्रत्येक सहभागिताका लागि बुझ्न असम्भव हुनेछ।
आधुनिक भाषण शिष्टाचारको धारणा
कुनै पनि कुराकानी यसको नियम अनुसार अनुसार गरिन्छ, र तिनीहरू ती स्थिर छन् जुन हामी पछ्याउँछौं, पूर्ण रूपमा कार्यका अनुक्रमको बारेमा सोच्न सक्दछ। विद्रोही सूत्रको साथ कुराकानी सुरु गर्न कुनै पनि मनमा आउँदैन? भाषण शिष्टाचारका नियमहरूसँग अनुपालन कुराकानीको उत्प्रेरित कोर्समा योगदान गर्दछ, तर उनीहरूलाई बेवास्ता गर्दा विवादको लागि पनि आवश्यक हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, "अज्ञात व्यक्ति" को लागि एक अपील व्यक्तिलाई केवल "इन्टरनेट" मा अनुमति दिइएको छ, "लाइभ" कुराकानीमा यो विलम्बको कारण हुनेछ, र यदि व्यक्ति उमेरमै पुरानो हो, त्यसपछि अपमानजनक। संचार शिष्टता विभिन्न स्थितियों मा व्यवहार को विनियमित गर्दछ, र उपयोग प्रयुक्त interlocutors, उनको सामाजिक स्थिति, उमेर, र संचार को स्थिति को पहिचान को डिग्री मा जानकारी प्रदान गर्दछ। यसको स्थिरताको बावजूद, भाषण सूत्रहरू ऐतिहासिक परिवर्तनको अधीनमा छन्, उदाहरणका लागि, "मनम" को अपील आज आशाजनक रूपमा देखिन्छ।
यो उत्सुक छ कि यी नियम न केवल नैतिक मानदण्डहरुमा आधारित हुन्छ, तर सांस्कृतिक र राष्ट्रिय परम्पराहरूमा पनि। यो भाषण शिष्टाचारका नियमहरूसँग परिचित हुदैछ, हामी देश वा क्षेत्रको संस्कृतिको बारेमा केही विचार प्राप्त गर्न सक्छौं, जसका प्रतिनिधिहरूले हामीलाई संचार गर्न आवश्यक पर्दछ। यो विचारको लायक छ कि यी नियमहरू समानता होइन, जुन, राष्ट्रीय मतभेदको अतिरिक्तमा, सामाजिक प्रकृतिको भिन्नताहरू छन्। उदाहरणका लागि, एक बच्चासँग कुराकानीमा प्रयोग गरिएका सूत्रहरू वयस्क हुँदा कुराकानी गर्दा अनुचित हुनेछ। यो प्रायः बालवालिका शिक्षकहरू र प्राथमिक स्कूल अध्यापकहरूमा पाइन्छ, संचारको मानदण्डहरूमध्ये एक प्रयोग भएको छ, उनीहरूले आफैलाई पुनर्निर्माण गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले अरूलाई जस्तो लाग्छ कि तिनीहरू बच्चाहरू जस्तै व्यवहार गर्छन्। यस्ता नग्नताहरूमा "भाषण शिष्टाचार" को अवधारणाको जटिलता, चाहे तपाइँ व्यापार साझेदारहरूको साथ वार्ता व्यवस्थित गर्नुहोस् वा अनुकूल समारोहको लागि एकसाथ भेट्नुहोस्, एक पासपोर्ट प्राप्त गर्नुहोस् वा ब्यूटी सैलूनमा जानुहोस् - तपाईंको संचारको प्रत्येक प्रकार तपाईंको नियमहरू पालन गर्नेछ।
आधुनिक भाषण शिष्टाचारको चिन्ह
पहिले नै माथि उल्लेखित रूपमा, सञ्चार गर्ने नियमहरू विषय हो भन्ने निश्चित छन् कि हामी तिनीहरूलाई अनौठो रूपमा प्रयोग गर्दछौं। यस घटनालाई अझ राम्रो बुझ्न, यो यसको मुख्य विशेषताहरूको बारेमा जान्न योग्य रहेको छ।
समाज द्वारा स्थापित संचारको नियम पालन गर्न आवश्यक छ।
विचार र भावना व्यक्त गर्न भाषण कार्यहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। यस्तो कार्यहरूको लागि धेरै विकल्पहरू छन्, तिनीहरूमध्ये केही धेरै प्रकार्यहरू संयोजन गर्न सक्षम छन्। उदाहरणका लागि, "धन्यवाद" शब्दको साथ हामी धन्यवाद गर्न सक्छौं, माफी माग्दा र कहिलेकाहीँ नकारात्मक भावनाहरु व्यक्त गर्न प्रयोग गरिन्छ।
सामाजिक "स्ट्रोकिंग" - यो ठेगानाकर्ता कसरी शिष्टाचारको नियम पालन गर्ने कुरा हो। अन्तर्वार्ताकर्ता "फारममा" (मालिकको सम्मानमा, एक मित्रको लागि हर्षित अभिवादन) को लागी, हामी यसलाई सेट अप बेपत्ता रेड, जो कुराकानीको अनुकूल कोर्सको लागि अवसर प्रदान गर्दछ।
सञ्चार पक्षहरूको स्पष्ट वा लुकेको प्रतिनिधित्व: "धेरै धेरै धन्यवाद" वा "माफ गर्नुहोस्, म फेरि यो गर्दैनु"।
भाषण शिष्टाचार र राजनीति को नियमहरु को बीच एक सीधा सम्बन्ध एक नैतिक श्रेणी हो जुन एक व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण विशेषता हो।
भाषण शिष्टाचार न केवल उपचार र विनाशहरूको मार्ग मात्र नियामक गर्दछ, तर कुराकानीको आचरण पनि। त्यसोभए, यो हेर्न आवश्यक छ कि कुराकानीको सबै सहभागीहरू कुराकानीको लागि रोचक थियो, श्रोताको रुचि कोयम राख्न र वर्गीकरणबाट बच्न। वास्तवमा, धेरै नियमहरू छन्, तर यी नियमहरूको अनुपालन सफल कुराकानीको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
भाषण र साक्षर भाषण
बोनौर - यो प्रोग्राम के हो र यसको प्रयोग कसरी गर्ने?
कर्पोरेट पहिचान - यो किन आवश्यक छ र यसलाई कसरी बनाउने?
एक व्यक्ति बन्ने
तपाईसँग एक कुरा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ - कुराकानीको लागि उत्तम शीर्षक
मस्तिष्कको लागि फिटनेस
स्व-विकास - कहाँ सुरु हुन्छ?
व्यक्तित्वको स्व सुधार
आत्मविश्वास कसरी भयो?
फ्रेडा कालो को अलमारी संग एक कोठा उनको मृत्यु 50 वर्ष पछि फेला पर्यो!
तेल छालाका लागि पाउडर
22 धेरै राम्रो अनुहारहरु संग समस्याहरु
चिकन स्तन बाट शिश केबब
पाट पेस्ट्रीको मासु पाई बनाइयो
प्राकृतिक नाखून - डिजाइन 2014
खरचनचेभमा शयनक्षेत्र गृह
बच्चासँग पारदर्शी स्नोट छ
लियोनार्डो दीक्यापियोरीले आफ्नो सम्बन्धलाई क्यामिली मोररोनसँग पुष्टि गरे
फल अंडा3मिमी
फोलिक एसिड के हो?
एड्रेनोजेनियनेटल सिंड्रोम - रोगविज्ञान को सबै विशेषताहरु
के म स्याउबाट प्राप्त गर्न सक्छु?
जिपरका साथ महिला रबर जूता
जिगरको लागि जडीबुटी